Akụkụ ihe mkpofu
Akụkụ Sistemụ Nri
Mpempe akwụkwọ nchara
Mmelite ahụ ọkụ Swine nke Afrịka: Mmalite ọrụ ugbo Vietnam akpaaka n'ụzọ iji nwetaghachi
Mmelite ahụ ọkụ Swine Africa: mmalite nke ọrụ ugbo Vietnam akpaaka na ụzọ iji nwetaghachi anụ ezi Vietnam na-aga ngwa ngwa mgbake.Na 2020, ọrịa ezì nke Africa (ASF) na Vietnam kpatara mfu nke ihe dị ka 86,000 ezì ma ọ bụ 1.5% nke anụ ezi. culled pigs na 2019. Ọ bụ ezie na ASF outbrea ...
Sistemụ ikuku ventilashị maka broilers na ebe obibi ọkụkọ
site admin na 21-09-06
A na-emezi sistemu ikuku ikuku maka broilers na dina nne ọkụkọ iji nye njikwa ihu igwe dị n'ime ụlọ ahụ, ọbụlagodi mgbe ihu igwe dị n'èzí ụlọ ahụ dị oke oke ma ọ bụ na-agbanwe. A na-ejikwa ngwaahịa ikuku ikuku na-achịkwa ọnọdụ ihu igwe dị iche iche gụnyere ikuku ikuku ...
Ụlọ anụ ọkụkọ ikuku ikuku dị mma
Ikuku ziri ezi bụ ihe dị mkpa maka ìgwè anụ ọkụkọ dị mma ma na-arụpụta ihe. N'ebe a, anyị na-enyocha usoro ndị bụ isi iji nweta ikuku dị mma na okpomọkụ kwesịrị ekwesị. Ikuku ikuku bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa na ọdịmma broiler na mmepụta. Usoro ziri ezi ọ bụghị naanị na-eme ka mgbanwe ikuku zuru oke th ...
Ịgbakọ usoro ikuku ventilashị chọrọ iji mepụta mgbanwe ikuku zuru oke ma mezuo ebumnuche dị mma dịtụ mfe. Mpempe ozi kachasị mkpa iji guzobe bụ njupụta ngwaahịa ngwaahịa kacha (ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ kacha elu nke igwe atụrụ) nke ga-eme n'oge ihe ọkụkụ ọ bụla nke ...
Mmelite ahụ ọkụ Swine Africa: mmalite nke ...
usoro nri ụlọ ọkụkọ, Sistemụ nri anụ ọkụkọ, nri ezi, Ihe mkpuchi mkpuchi griin haus, Pad jụrụ oyi, anụ ọkụkọ feeder,